Madaxweynaha Somaliland: Turkigu ku keliyeysan maayo wadahadallada inaga iyo Soomaaliya - BBC News Somali
Madaxweynaha, ayaa khudbadiisa kaga hadlay waxyaabaha u qabssoomay xukuumadiisa muddadii sanadka iyo dhowrka bilood ahayd ee xukunka uu hayay iyo waliba qorshayaassha ay ku doonayaan in ay ku gaaraan yoolkooda.
Shirweynaha Somaliland iyo Saaxiibada S/land
Waxyaabaha u qabsoomay ayaa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxuu ka xusay arrimaha horumarinta caafimaadka, barnaamijka qaran ee shaqaaleysiinta dhalinyarada iyo dhismaha wadooyinka.
Muuse Biixi Cabdi, ayaa sheegay in xukuumaddu ay wax badan ka qabatay arrimaha caafimaadka sida dhismayaasha isbitaalada oo la kordhiyay.
Waxa uu sidoo kale ka hadlay dhanka shaqo abuurka iyo barnaajimka Shaqo Qaran ee Somaliland kaasi oo dhawaan la hirgeliyey laguna shaqaaleysiiyay dhalinyaro aad u badan oo ka kala socotay dhammaan gobolada Somaliland.
Sidoo kale madaxweynuhu wuxuu ka hadlay mashaariicda biyaha oo la balaarinayo iyo dhismayaasha waddooyinka sida dhismaha wadada weyn ee isku xidhi doonta Berbera iyo wajaale ee loo bixiyey Berbera Corridor.
Mar uu ka hadlayay madaxweynuhu arrimaha dibedda wuxuu sheegay inay xiriir xooggan la sameeyeen waddamo badan oo caalamka ah.
Isla markaana ay rajo badan ka qabaan in Somaliland aqoonsi hesho maadaama si ka duwan sidii hore ay haatan u wajahayaan caalamka.
Waxuu sidoo kale sheegay in waddamo badan oo caalamka ah ay daneynayaan inay qeyb ka noqdaan wadahadlada Soomaaliya iyo Somaliland laga yaabo inay yeeshaan, halka markii hore wadahadakladaasi ay ku koobneyd dhex dhexaadintooda dowladda Turkiga oo keli ahi.
"Waxaanu taageero diblomaasiyadeed ka helnay dalalka aynu saaxiibka nahay, waxayna ku qanciyeen badi dalalka caalamka ugu tunka weyn leh in Somaliland taagan tahay waqtigii beesha caalamku dhexgali lahayd dalalka Somaliland iyo Soomaaliya'' ayuu yidhi madaxweynuhu.
Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, oo ku dheeraaday ka hadalka xiriirka dalalka caalamka iyo wadahadallada Soomaaliya ayaa sheegay in dalalka Sweden iyo Switzerland ay ka mid yihiin uu mid waliba gaarkiisa usoo bandhigay inay diyaar u yihiin inay martigeliyaan wadahada Soomaaliya iyo Somaliland, arinkaasna ay Somaliland aqbashay.
"Dowladda Turkiga ayaan in badan ka wadahadalnay iyadoo dooneysa inay kaligeed na dhexdhexaadiso inaga iyo Soomaaliya, haseyeeshee anagoo dareensan toddobo sano oo Turkigu arrinkaas ku jiray in aanu wax midho ah dhalin waxaanu ku talinay in arrinta wadahadalku ay noqoto mid ay goobjoog ka noqdaan dhammaan dowladaha iyo ururada caalamiga ah ee arrinta wadahadalka ah daneeyaa''
Ma dhab baa in Maraykanku doonayo inuu Cabbaas nin kale ku bedelo?